"विस्फोटक" का संशोधनहरू बिचको अन्तर - विकिपिडिया
"विस्फोटक" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
विस्फोटक (सम्पादन गर्ने)
१०:३०, ३० जुलाई २०१८ जस्तै गरी पुनरावलोकन
No change in size , ३ वर्ष अघि
२०:१४, २० अगस्ट २०१५ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
सा (बोट: स्वचालित पाठ परिवर्तन (-लाइ +लाई))
१०:३०, ३० जुलाई २०१८ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
१. [[डायनामाइट]]—तीव्र विस्फोटक, शान्तिकालका लागि
२. [[विस्फोटक जिल्लाहरुटिनजिल्लाहरूटिन]]—तीव्र विस्फोटक, शान्तिकालका लागि
३. [[टीएनटी]] (TNT) -- तीव्र विस्फोटक, युद्धका लागि
[[विस्फोटक जिलेटिन]]मा ९० प्रतिशत ग्लिसरीन र १० प्रतिशत नाइट्रोसेलुलोस रहन्छ। टी एन टी ट्राइनाइट्रोटोल्विन हो। यो ८१ डिग्रीसे मा पिघल्दछ। डी एन टीका साथ अमोनियम नाइट्रेटका मिले रहनाले टी एन टी अधिक प्रबल विस्फोटक हुन जान्छ। पिक्रिक अम्ल विस्फोटक हो। फिनोलका नाइट्रेटीकरणदेखि यो बन्दछ। यो पहेंलो ठोस छ, जो १२१ डिग्रीसे मा पिघल्दछ। यसको सीस लवण पिक्रिक अम्लदेखि ५ गुना अधिक सुग्राही हुन्छ। स्वय पिक्रिक अम्ल खोलमा भरिन्छ। अमोनियम नाइट्रेट टी एन टीका साथ मिलाएर प्रयुक्त हुन्छ। यो आक्सीकारकको पनि कार्य गर्दछ। स्वयं यो कठिनतादेखि प्रस्फोटिन (detonate) हुन्छ।
[[धूमहीन चूर्ण]]मा [[नाइट्रोसेलुलोस]] रहन्छ। यो यस्तोटोनदेखि जिल्लाहरुटिनीकृतजिल्लाहरूटिनीकृत गरे रहन्छ। स्थायित्वकारी (stabilizer)का रूपमा अल्प मात्रामा डाइफेनिलेमिन र यूरिया प्रयुक्त हुन्छन्।
== विस्फोटकहरुका गुण र परीक्षण ==
[[राइफल]]का [[कारतूस]]मा पनि एउटा प्रणोदक र अर्को बुलेट वा गोली जा यशद-ताम्र मिश्रधातुको बनी हुन्छ, सीसका निचोलमा राखेको हुन्छ। टैंकमार (antitank) राइफलहरुमा यस ्पातको गोलीहरु हुन्छन्। हथगोलेमा कुनै प्रणोदक हुँदैन।
रेशेका रूपमा नाइट्रोसेलूलोस (गनकटन) उच्च विस्फोटक हुन्छ, परन्तु जिल्लाहरुटनीकृतजिल्लाहरूटनीकृत हुनमा मंद विस्फोटक बन्न जान्छ। अकेले वा अन्य पदार्थहरुका साथ मिलाएर, यही प्रधानतया मंद विस्फोटकका रूपमा व्यवहृत हुन्छ। गोलीका खोलमा टी एन टी, वा एमेटोल (टी एन टीका साथ एमोनियम नाइट्रेट मिल्यो भयो), पिक्रिक अम्ल, वा यसका लवण, रहन्छन्। यसको काम हुन्छ निदिष्ट स्थानमा पुगकर, तीव्रगामी टुक्नमा चूर चूर हो जाना र वास्तविक मिसाइल वा अस्त्र बन जाना। खोलमा रोजिन वा बारूददेखि बँधा भयो गहरुद रहन्छ। यस्ता खोललाई "श्रेप्नेल शेल" (Shrapnel shell) भन्दछन्। गहरुदका स्थानमा युद्ध ग्यास पनि रह सगर्छ। खोललाई पली्दै (fuse) द्वारा जलाईन्छ। खोल इस्पातको बनाएको हुन्छ। बहुधा त्यसमा ऐलुमिनियमको तिखो धार लागेको हुन्छ।
विस्फोटकमा प्रयुक्त हुने नाइट्रोसेलुलोजमा नाइट्रोजन १२.८ प्रतिशत रहन्छ। राख्नमा धूमहीन चूर्णको ह्रास हुन्छ। अत: बीच बीचमा त्यसका परीक्षण गर्दै रहना आवश्यक हुन्छ। कर्डाइटमा नाइट्रोसेलुलोज र नाइट्रोग्लिसरीन दुइटै रहन्छन्। इनकी आपेक्षिक मात्रा निश्चित छैन रहती। एउटा कर्डाइटमा नाइट्रोसेलुलोज ६५ भाग, नाइट्रोग्लिसरीन ३० भाग र खनिज जेली ०.५ भाग रहन्छन्। एउटा अर्का कर्डाइटमा नाइट्रोसेलुलोज ३७ भाग, नाइट्रोग्लिसरीन ५८ भाग र जेली ०.५ भाग रहन्छन्। ऐसीटोन ्जिलेटिनीकारकका रूपमा प्रयुक्त हुन्छ। पोटैशियम क्लोरेट, पोटैशियम परवलोरेट, नाइट्रोग्वेनिडिन, मर्करी फल्मिनेट, लेड ऐजाइह, नाइट्रो स्टार्च, द्रव अक्सीजन र काष्ठ कोइला पनि विस्फोटकका रूपमा प्रयुक्त हुन्छन्।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/654417" बाट अनुप्रेषित